Ku darista metadata for Windows iyo Mac waxay u baahan tahay ka dib markii tallaabo fiican u faahfaahsan by tilmaamaha tallaabo. Wixii newbie ah, waxaan kor inaad isticmaasho fududahay in la isticmaalo software, "ayuu Wondershare Video Converter Ultimate". Tani waa software ugu wanaagsan ee la heli karo si uu kaaga caawiyo in si guul leh ku daray metadata for Windows iyo Mac. Xeerarka hoos ku qoran haddii ay si fiican u raacay ku qoran way ku caawin in la gaaro natiijada doonaa.
Qeybta 1: Download iyo rakib Wondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 2: Isticmaalka MetaZ on Mac inay dar metadata
Qeybta 3: Waa maxay metadata?
Wondershare Video Converter Ultimate Badasha videos u dhexeeya tirada badan oo ah qaabab ka dibna iyaga dhoofisa in kasta oo qalabka doortay.
Download oo hadda ka link soo socda rakibi.
Waxa labaad ee in la sameeyo waa in ay dajiyaan video MP4 ah meesha metadata ah lagu dari karaa.
Iyada oo tallaabo soo socda ay tacliin talaabo waxay kaa caawin doontaa in uu ku tuso, sida aad ku dari kartaa metadata galay files MP4 aad.
Tallaabada 1 Iska Video ah Uploaded galay metadata Tagger ee MP4
Si tan loo sameeyo, kaliya samayn jiita ah iyo hoos u dhac ah video MP4 soo galeen software ah. Haddii aad rabto inaad ku darto metadata ah DVD aad, guji DVD Load in interface software ah. Waxaa jira waa in aanay noqon wax walaac ah oo ku saabsan qaab video sida uu aqbalay qaab kasta oo aanay jirin xadeynta size.
Tallaabada 2 Dooro Device Apple ah sida Qaabka Output ah
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaabka ah in ay taageerayaan Lugood hor waxaad ku dari kartaa metadata in aad MP4 video. Riix badhanka hoos arrow in ka yar yahay qaab Output iyo dooran iPhone ama iPad in ka yar yahay category Apple ah. Ikhtiyaarka ah waa in ay doortaan M4V sida qaab wax soo saarka hoos yaala qaybta qaab ka.
Tallaabada 3 dar metadata in MP4
Riix icon this, ka dibna suuqa kala metadata ku daray ah soo booda. Tusaale ahaan, haddii ay tahay movie MP4 ah, waxaad u baahan doontaa inaad ku qor magaca video ka dibna riix raadinta. In aan sidaa yeelno, tagger metadata u MP4 ka raadin doona macluumaadka metadata aad videos. Waa inaad ku darto metadata ah naftaada haddii aad soo dhoofsadaan video guriga sababtoo ah macluumaadka metadata in la helo database doono.
Tallaabada 4 Play MP4 on Device Apple
Hadda waxaad ku dari kartaa nooc kala duwan ee metadata in file MP4 aad. Waxaa jira tab soo socda waxaad ku dari kartaa macluumaad metadata,
Iyo video qeexidda
Dhamaan macluumaadka aad ku dari kartaa sida metadata in files MP4 aad this, waa wakhtigii la weeraray button badalo ugu hooseysa ee interface ka. Sababtoo ah software u shaqeeyo xawaare aad u dheer, waxay qaadan doontaa oo keliya xoogaa daqiiqo ah inay ku dhameystaan ​​qaab beddelidda. Videos metadata ayaa haatan si toos ah geyn doonaa qaybta midig ee maktabadda Lugood ah. Wixii hab lagu xaqiijin, guji videos ah, metadata tusi doonaa.
Fiiro gaar ah: Wondershare Video Converter Ultimate ku dari kartaa macluumaad metadata in kale qaabab video laga reebo MP4.
MetaZ kaliya aqbalay MP4 qaab video for metadata tagging qayb ahaan sabab u ah AVI iyo wmv files aan caadi ahaan loo isticmaalo on Mac. Ogow in haddii aad leedahay wmv ama AVI file ah, aad leedahay si aad u badalo si MP4 ka hor waxaad ku dari kartaa metadata ku yaal. Si aad ku dari metadata isticmaalaya MetaZ on Mac, talaabooyinka soo socda waa in la raacaa.
Tallaabada Download Version dhawaan MetaZ
Fiiro Gaar ah: Waxaa la iman file zip ah oo waa in la unzipped .. .Unzip iyo rakibi. Marka lagu rakibay, bilowdo MetaZ.
Step2 dar files
Ku dar files dhinaca midigta ee suuqa kala MetaZ sida lagu muujiyey kor ku xusan ama aad tagi karaan faylasha ku icon MetaZ ee dekedda ah. Si kasta, waa ay fududahay. Ama saxaafadeed "Command +0" in ay doortaan files ama aad jiidi oo hoos u faylasha.
Next aad riix file ah in aad doonayso in ay ka shaqeeyaan. MetaZ u badan tahay filename u isticmaali doonaa sidii malayn karo si loo ogaado waxa ay horyaalka ee filimka uu noqon karaa oo waxaa lagu arki karaa sanduuqa raadinta. Waxaa, waxaad samayn kartaa la saxo ee horyaalka si aad u baadhid iyo saxaafadda galaan si ay u bilaabaan raadinta. Isticmaalka ah qayb ka mid ah horyaalka iyo sidoo kale muddo dheer shaqeyn kara ma aha mid aad generic. Markaas laba jibaar guji horyaalka ugu fiican gaardis arkay hoos sanduuqa raadinta.
Halkaa marka ay marayso, MetaZ pre-dad doonaa beeraha macluumaad ka heli internet isticmaalaya movieDB ama dadka kale ka. Riix dhex ah iyo xaqiijin macluumaadka.
Marka aad ku qanacsan tahay warbixinta, hubiyo taxan ee soo socda si ay sanduuqyada waxaa saxday.
Tallaabada 3 Qor metadata ah
Ugu dambayntii, si ay u qoraan metadata in ay file filim aad, aad u leedahay in guji "qoraan" icon ah oo qaadan kara sida wax u dhigma 10 seconds in ay qoraan.
Fiiro gaar ah: MetaZ la saf shaqayn karaan oo ay awood u leeyahay inuu ku qori movies oo dhan hal mar.
Metadata u file a movie sida MP4 ka fudud yahay macluumaad ku saabsan filimka lagu kaydiyaa file ah. Waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo in lagu qeexo macluumaad video. Macluumaadka waxaa ka mid ah horyaalka habboon, agaasimaha iyo soo saarayaasha, jilayaasha, ratings, sifayn, tag oo sharaxaad guud.
> Resource > MP4 > Sida loo dar metadata MP4 for Windows / Mac (Mavericks ka mid ah)